SAWIRRO XUL AH: Xaflad lagu dhiira gallinayo ciyaartooyda kubadda Koleyga Heegan oo ka dhacday Liido Sea Food – Gool FM
SAWIRRO XUL AH: Xaflad lagu dhiira gallinayo ciyaartooyda kubadda Koleyga Heegan oo ka dhacday Liido Sea Food
jilacow November 24, 2017
(Muqdisho ) 24 Nof 2017. Kooxda Heegan ayaa xaflad si heer sare loo soo aggaasimay ugu dabaal degtay hanashada horyaalka kubadda koleyga oo ay ku guuleysatay toddobaadkii aynu soo dhaafnay.
Xafladaan oo ka dhacay Liido Sea Food, ayaa waxaa kasoo qayb galay Xildhibaano ka tirsan dooladda Soomaaliya, masuuliyiin ka socda xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda koleyga , guddoomiyayaasha kooxaha kubadda koleyga ee dalkeena, halyeeyo horay u soo maray kooxda ciidanka Booliska , Macalimiin , Ciyaartooy qaran iyo taageerayasha kooxda Heegan.
Guddoomiyaha Naadiga Heegan C/Raxmaan Axmed Cabdi Mursal ayaa furay munaasibaddii ka dhacday Liido Sea Food, waxa uuna u mahad celiyay ciyaartooydii naadiga u qaaday horyaalka kubadda koleyga, isagoo sidoo kale mahad u soo jeediyay kasoo qeyb galayaasha xafladda.
Guddoomiyaha xiriirka kubadda koleyga C/laahi Cadaani iyo sidoo kale xildhibaanada qaran ee ku sugnaa goobta ayaa si isugu mid ah ugu hambalyeeyay ciyaartooyda dadaalka badan ku bixiyay in ay kooxda ku guuleysato horyaalka kubadda koleyga Soomaaliya.
Ugu dambeyn waxaa shahaado sharaf lagu guddoonsiiyay ciyaartooyda, macallimiinta iyo taageerayaasha kooxda waxa ayna ku muteysteen dadaalkoodii guusha ku dhammaaday sida uu Gool FM u sheegay Maxamed Maaw oo ah xoghayaha kooxda Heegan.
Arsene Wenger oo doortay Tababarihii ka badeli lahaa xilka Arsenal
Hazard oo Shaaca ka qaaday Laacibka uu maaliyada ka badelan doono kulanka habeen dambe ee Liverpool